သတင်း - ပြောင်းပြန် osmosis အမြှေးပါး၏အာရုံစူးစိုက်မှု polarization ကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်
Reverse osmosis system သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအလိုအလျောက်အလွန်သန့်စင်သောရေသန့်စင်ရေးကိရိယာများ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် reverse osmosis system တွင်လျှို့ဝှက်ထားသည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ reverse osmosis အမြှေးပါး၏မျက်နှာပြင်သည် solute ဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှု polarization ကိုဖွဲ့စည်းရန်လွယ်ကူသည်။ သို့မဟုတ်ရေသန့်စင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏စွမ်းရည်အရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အခြားထိန်းသိမ်းထားသောအရာများ။
ပထမ ဦး စွာဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အနှောင့်အယှက်တိုးပွားစေရန်အသုံးများသောနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအမြှေးပါးမျက်နှာပြင်မှတဆင့်စီးဆင်းသောအရည်၏ linear အလျင်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ solute ၏ထိစိမ့်ဝင်ချိန်ကိုအရည်၏နေထိုင်ချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအလိုအလျောက်အလွန်သန့်စင်သောရေသန့်စင်ရေးကိရိယာများတွင်အရည်၏အလျင်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၂၉ ~ ၁၀၀um spheres များကိုသန့်စင်ထားသောအရည်ထဲသို့ထည့်ပြီးအမြှေးပါးနယ်နိမိတ်အလွှာ၏အထူကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထုတ်လွှတ်သည့်အလျင်ကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် reverse osmosis system မှတဆင့်စီးဆင်းသည်။ ဘောလုံး၏ပစ္စည်းကိုဖန် (သို့) မီသိုင်းမက်ကရာရိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် tubular reverse osmosis system အတွက်, micro ရေမြှုပ်ဘောလုံးကိုလည်း feed ကိုအရည်ထဲသို့ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပန်းကန်နှင့်ဘောင်အမျိုးအစားအမြှေးပါး module များအတွက်ဖြည့်ထည့်သည့်နည်းလမ်းသည်မသင့်တော်ပါ။ အဓိကအားဖြင့်စီးဆင်းသောလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၏အန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
3. Pulse နည်းလမ်း
ရေသန့်စင်စက်တွင် pulse generator တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ သွေးခုန်နှုန်း၏လွှဲခွင်နှင့်ကြိမ်နှုန်းကွာခြားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် amplitude (သို့) ကြိမ်နှုန်းများလေလေစီးဆင်းမှုအလျင်သာလေ။ ရောနှောအသုံးပြုခြင်းကိုစမ်းသပ်ကိရိယာအားလုံးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ အတွေ့အကြုံကအစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းမှုကိန်းသည်တုန်ခါမှု၏တော်လှန်ရေးအရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
လှိုင်းလေထန်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသူများသည်စီးဆင်းမှုပုံစံကိုမြှင့်တင်နိုင်သည့်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် tubular အစိတ်အပိုင်းများအတွက် spiral baffles များကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ပန်းကန်သို့မဟုတ်လိပ်အမျိုးအစားအမြှေးပါးအပိုင်းအတွက်လှိုင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုလှိုင်းလေထန်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်စီတန်းနိုင်သည်။ လှိုင်းလေထန်ခြင်းကိုမြှင့်တင်သူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။
5. လူစုခွဲစကေး inhibitor ထည့်ပါ
ပြောင်းပြန် osmosis အမြှေးပါးကိုရေသန့်စင်ရေးကိရိယာများတွင်ချုံ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ pH တန်ဖိုးကိုညှိရန် sulfuric acid သို့မဟုတ် hydrochloric acid ကိုထည့်သည်။ သို့သော်အက်ဆစ်စနစ်၏ချေးခြင်းနှင့်ယိုစိမ့်ခြင်းကြောင့်အော်ပရေတာသည်ပြisနာတက်သည်၊ ထို့ကြောင့်ရေသန့်စင်ခြင်းစနစ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်စွန့်ကြဲသောစကေးတားစီးမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။